တော်ဝင်စင်တာရောက်ရင်ဘာစားရမလဲဆိုတဲ့သူတွေအတွက်…. 574 views
မာလရှမ်းကောနဲ့ အခြားအစားစာတွေ ဟိုးအရင်လတွေတုန်းက တောင်ဥက္ကလာမှာရှိတဲ့ Woker Woker ဆိုင်အကြောင်း Review ရေးခဲ့တာကို မှတ်မိကြလားဟင် ? အခုက အဲ့ဒီ Woker Woker ကပဲနောက်ထပ်ဆိုင်ခွဲအနေနဲ့ တော်ဝင်စင်တာမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့လို့ အဲ့ဒီမှာသွားစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... အရင်တောင်ဥက္ကလာဆိုင်ခွဲမှာသွားစားတုန်းက မီနူးကသိပ်မစုံ သေးဖူး။ အခုတော့အသစ်ဖွင့်တဲ့ဆိုင်မှာရော ဆိုင်ဟောင်းမှာပါ မီနူးအသစ်တွေထပ်တိုးလာတယ်။ အသေးစိတ်လေးတွေကိုတော့အောက်မှာသေချာဖတ်ကြည့်ပေးပါနော်…..
Woker Woker မှာအဓိကရတာက မာလရှမ်းကော။ ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်ရသေးတဲ့အစားအစာတွေက စင်္ကာပူ အစားအစာတွေရှိတယ်။ နောက်ပြီးအခုဆို အသစ်ထွက်ထားတဲ့ဖားသားမီနူးတွေ၊ နောက် Stingray မီနူးလေး တွေရနေပြီ။ အခြား တစ်ယောက်စာ One Potion ပုံစံလေးတွေ၊ နောက် ထမင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့မီနူးလေးတွေ၊ Noodle နဲ့ပတ်သတ်ပြီးရနိုင်တဲ့မီနူးလေးတွေ အစုံပဲရှိပါတယ်။ ဆန်ပြုတ်ဆိုရင်လည်း တကယ်ကိုမှအနံ့၊ အရသာနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်ညီညွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ ဒီဆိုင်လေးက တော်ဝင်စင်တာ Basement ကစားသောက်တန်းလေးတွေထဲမှာပဲရှိနေတာပါ… ပြည်လမ်းဘက် အပေါက်ကသွားရင် အစွန်ဆုံးပါပဲ။ ကားပါကင်နဲ့ဆိုကပ်ရပ်ပဲ။ Organic Nail Art ဆိုင် မျက်စောင်းထိုးမှာပါ။ လိပ်စာအတိအကျက B130, Basement 1, Taw Win Center မှာပါ။
ကိုယ်တွေဒီတစ်ခေါက်စားခဲ့တာက မာလရှမ်းကော။ ဒါကတော့ဒီဆိုင်ရဲ့အဓိကအစားအစာ၊ ကိုယ်လည်းအရင်ကစားဖူးနေကျဆိုတော့ ကြိုက်လို့ထပ်စားခဲ့တယ်။ သူ့ကိုတော့ထွေထွေထူးထူးပြောဖို့ လိုမယ်မထင်ဖူးနော်။ ဒီမာလရှမ်းကောထဲမှာပါတဲ့ဟင်းအမျိုးအမည်တွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အချိုးအစားတွေနဲ့ ထည့်ပြီးအရသာကိုလည်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပြောဆိုပြီး အရသာရှိတဲ့ဟင်းတစ်ပွဲကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ Woker Woker ရဲ့မာလရှမ်းကောအရသာက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံမျိုးသွားတာတော့မဟုတ်ဖူး။ နည်းနည်းလေးလေးလေးနဲ့ သူ့ရဲ့အစပ်ကလည်းစ စားစားချင်းမှာမပေါ်လွင်ပေမယ့် စားနေရင်းနဲ့ ပူပြီးစပ်လာတဲ့ပုံစံမျိုး။ ကိုယ်က အထုံကြောက်တဲ့သူဆိုတော့ အထုံရှောင်ခိုင်းထားတော့ စားရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ ကိုယ်တွေယူလိုက်တာ (၁၁၀၀၀)ကျော်ကျော်ပဲ ကျတယ်။ မာလရှမ်းကောကိုဆိုရင် စီချွမ်းစတိုင်နဲ့မြန်မာစတိုင်ဆိုပြီးရနိုင်ပါသေးတယ်။
နောက်အခြားမီနူးထဲမှာဆိုရင် ဖားသားစွပ်ပြုတ်၊ ပုစွန်ကွေကာ၊ ငါးလိပ်ကျောက်ကင်၊ ဆားဘဲဥဆမ်းဝက်နံရိုး အဲ့ဒါတွေထပ်စားခဲ့သေးတယ်။ မီနူးအသေးစိတ်ကိုတော့ပုံအောက်တွေမှာသေချာရေးပေးထားတယ်နော်… အဓိကကိုယ်ပေးချင်တဲ့ Information က တောင်ဥက္ကလာမှာရှိတဲ့ Woker Woker ဆိုင်ခွဲကသင်္ကြန်တွင်း ပိတ်တယ်တဲ့နော်… သင်္ကြန်တွင်းလည်ကြကဲကြမယ့်ကိုကိုမမတွေအတွက်ရော၊ တစ်နေကုန်အိမ်တွင်းအောင်း ပြီး ညကျမှအပြင်ထွက် စားကြသောက်ကြမယ့်သူတွေအတွက် လည်းအဆင်ပြေတယ်ရှင့်…. ဖားသားစွပ်ပြုတ် - ဒီမှာဆိုရင် ဆန်ပြုတ်ရယ် ဖားသားစွပ်ပြုတ်ရယ်။ ဆန်ပြုတ်က ဟိုဘက်ဆိုင်မှာစားထဲ ကကြိုက်တာ။ သူကပန်းကန်လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဆန်ပြုတ်အနံ့သင်းသင်းလေးကမွှေးမွှေးလေးတက်လာတယ်။ နောက် သူ့ရဲ့ဆန်ပြုတ်ကလည်းစီးစီးလေး။ မာလည်းမမာဖူး။ ဆန်ပြုတ်ကြိုက်တဲ့သူတွှေအတွက်ရော၊ နေမကောင်းတာဘာညာအားဖြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဖားသားစွပ်ပြုတ်ကဆိုရင်လည်း နွေးနွေးလေး။ ဟင်းရည်လေးကိုသောက်လိုက်ရင် ဆေးရည်လိုမျိုးအရသာလေးဖြစ်နေပေမယ့် အသားဖက်ကို စားကြည့်လိုက်ရင်နူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့ တစ်မျိုးလေးပဲ… သူကတစ်ပွဲကို (၆၅၀၀)ကျပ် (ဆန်ပြုတ်ရော၊ ဖားသားစွပ်ပြုတ်ပါပါပြီးသားပါ)
Stingray (ငါးလိပ်ကျောက်ကင်) အရသာကတော့ခပ်လန်းလန်းလေးပဲ။ အချိုဓါတ်နဲ့ အလေးဓါတ်လေးပါတယ်။ နောက် သူကအရိုးတွေပါကိုက်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့ အမိုက်စားပေါ့။ အရိုးအတွက်အာရုံနောက်စရာလည်း မလိုဖူး။ အဲ့ဒါကိုမှသံပုရာအရည်ညှစ်ပြီး ကြက်သွန်လေးနဲ့ထပ်ပေါင်းစား…. ပိုမိုက်သွားတယ်။ သူကတစ်ပွဲကို (၁၂၀၀၀)ကျပ်ပါ။
ဆားဘဲဥအနှစ်ဆမ်းဝက်နံရိုး - ဝက်နံရိုးကိုမှဆားဘဲဥအနှစ်ချိုချိုလေးနဲ့ လောင်းကြော်ထားတာ။ ခပ်ချိုချိုလေး ပဲ။ ငရုတ်သီးဖက်လေးတွေပါပေမယ့်မစပ်ဖူး။ အဲ့ဒါကို ပုစွန်နဲ့လည်းရ၊ ကြက်သားနဲ့လည်းရတယ်။ သူကတော့တစ်ပွဲကို (၃၈၀၀)ကျပ်ပါ။ ပုစွန်ကွေကာ - သူကိုတော့ကလေးတွေ၊ အချိုကြိုက်တဲ့လူတွေတော့အကြိုက်တွေ့ကြမယ်။ ပုစွန်ကိုမှ ကွေကာအဖက်လေးတွေနဲ့ကြော်ထားတာ။ အဖက်လေးတွေကလည်းကြွပ်ကြွပ်လေးတွေ။ အရသာကတော့ အချို၊အဆိမ့်လေး။ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်မွှေးမွှေးလေးလည်းပါတော့အနံ့လေးကတော့တော်တော်မိုက်တယ်။ သူကပုစွန်(၆)ကောင်ပါတယ်။ တစ်ပွဲကို (၅၈၀၀)ကျပ်ပါ။
သွားစားချင်ရင်တော့ Reserve ကြိုလုပ်သွားရင်နေရာအတွက်ပိုစိတ်ချရမှာပါ။ 09-785405537, 09-785185798 တွေကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်က မနက်(၉)နာရီခွဲကနေ ည(၉)နာရီအထိဖွင့်ပါတယ်။
#MyLann #Online_Restaurant_Directory #Online_Food_Guide #Food_Review_in_Yangon #Foodie_Myanmar #Restaurant_in_Yangon #Restaurants #Food_Lover #Food_Crazy #Woker_Woker #Mala_Shan_Kaw #Singaporean_Restaurant #Taw_Win_Center